Magaalada Gothenburg waxa si weyn looga xusay sannadguuraddii 14 aad ee dhismihii Puntland
Gothenburg Axad 9 September 2012 SMC
Xaflad si heer sare loo agaasimay oo lagu xusay sannadguuraddii 14aad ee dhismihii dawlad goboleedka Puntland ayaa ka dhacday magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. Dadweyne aad u faro ayaa soo qaybgalay xafladda.
Xiriiriyaha barnaamijka mudane rooble ayaa ku soo dhoweeyey dadweynihii ka soo qaybgalay xaladda, tilmaamayne qiimaha iyo qadarinta ku leedahay bulshada soomaliyeed ee deggan Puntland munaasabada maanta.
Codbaahiyaha waxa lagu soo dhoweeyey shiikh xuseen goodle oo goobta ka soo jeediyey kalmado kooban oo diini ah.
Mudane abdullahi mohamed Ahmed jowhar oo ah gudomiyaha jaaliyadda puntland community organisation ee Gothenburg ayaa ka warbixiyey waxqabadka jaaliyadda , gaar ahaan mashruuca qalabeeynta cusbitaalada Puntland oo ah mashruuc muhimad weyn u leh Horumarinta caafimaadka puntland. Wuxuuna dadweynihii ka soo qaybgalay ku guubaabiyey in ay taageereen dadaalka jaaliyadda, Isla markaana gacan ka geystaan maalgelinta mashruuca.
Waxgaradkii iyo aqoonyahanadii goobtaa ka hadlay waxa ka mid ah cabdirahman haji, yusuf qarawi iyo cabdicasis berendere oo hadalo wax ku ool ah goobtaa ka soo jeediyey.
Waxa khadka telefonka kaga soo qaybgalay xafladda wasiirka arimaha gudaha general ilkajiir warbixin ballaaran dhinaca hormarka dalka ka soo jeediyey, Isla markaana dhageeystayaashu fursad u helaan inaay suaalo ku saabsan dhinaca doorashada iyo batroolka halkaa ka weydiyeen.
Waxa kale oo xafladda ka soo jeediyey sugaan aad loo jecleystay oo ay ka mid ahaayeen abwaan hurfe,abwaan khalif, abwaan casho cuud iyo abwaan xuseen goodle.
Waxa dadweynihii ka soo qaybgalay jeedo wadani ah ku maaweelinayey fanaaniinta nasteexo indho, xasan wado, burci,cali najib iyo sadiq.
Xafladda waxay ku soo gabagaboowdey jawi aad u wanaagsan. (Halkaan ka daawo sawiro kale) Maxamuud Axmed Xasan